स्पेनी आशा, ‘टिकी टाका’ र इनिएस्टा-इस्को - खबरम्यागजिन
Homeम्यागजिनस्पेनी आशा, ‘टिकी टाका’ र इनिएस्टा-इस्को
June 12, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि म्यागजिन, शब्द 0
स्पेन विश्व फुटबलको एउटा बलियो टीम हो। सामुहिक प्रयासले कसरी म्याच जितिन्छ, त्यो स्पेनबाहेक शायदै अरूलाई थाहा होला। स्पेन कहिले एक खेलाड़ीमाथि भर पर्दैन। ‘फुटबल 11 खेलाड़ीको हो र 11 खेलाड़ीकै सामुहिक प्रयासले म्याच जितिन्छ’, यो कुरा स्पेनलाई राम्ररी थाहा छ।
तपाईंले ‘टिकी टाका’ हेर्नु भएको छ? छैन भने स्पेनको खेल हेर्नुहोस्। अवाक बन्नुहुनेछ तपाईं। ‘टिकी टाका’ स्पेनले जन्माएको फुटबल शैली। सोझै भाषामा भन्नुपर्दा छोटो-छोटो पास खेलेर विपक्षी टीमको रणनीति भताभुङ्ग पार्ने गजबको खेल।
हेरिरहुँ लागिरहने, मुखबाट त्यसै त्यसै वाह! वाह! निस्कने खेल कौशल। सन् 2008 र 2012 को युरोकप तथा 2010 को विश्वकप स्पेनले यसै ‘टिकीटाका’ शैलीको फुटबल खेलेर जितेको हो।
बलियो स्पेन सधैँ विश्वकपको विजेताको सम्भावित सूचीमा पर्ने टीम हो। सन् 2010-को विश्वकपमा विश्वले नयाँ विजेता पाउँदा विश्वकपको उपाधि स्पेनको हातमा थियो। यसपटक स्पेनसँग युवा र पाको खेलाड़ीहरूको गजबको संयोजन छ। एकसाएक प्रतिशाली खेलाड़ीहरू छन्, स्पेनमा।
नामै लिनपरे हामी आन्द्रे इनिएस्टा, सर्जियो रामोस, सर्जियो बुस्केट, जोर्डी अल्बा, जेरार्ड पिके, इस्को, डिएगो कोस्टा, लुकास भास्केज, डेभिड डी गिया, डानी कार्भाहल, मार्को एसेन्सियो, डेभिड सिल्भा, कोके, थियागो अल्कान्ट्रा, लागो अस्पास आदिलाई देखाउन सक्छौं।
यी खेलाड़ीहरू, जसले पछिल्ला केही वर्षयता क्लब म्याचमा अच्चकाली राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्/गर्दै आएका छन्। यी स्पेनी खेलाड़ीहरू ‘टीम स्पीरिट’ गजबको पाइन्छ। यो त्यो टीम हो, जसले पछिल्लो 28 मार्चमा खेलिएको मैत्री म्याचमा बलियो अर्जेन्टिनालाई 6-1 -ले धुलोपिठो पारेको थियो।
यो म्याचमा नायक बनेका इस्कोले ह्याट्रिक गरेका थिए। यसपटक रूस विश्वकपमा स्पेनी आशा भनेको इस्को-इनिएस्टा हुन्। यी दुईले टीमका लागि महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन गर्ने कुरामा स्पेन विश्वस्त छ। एकप्रकारले भन्नु हो भने इस्को-इनिएस्टाको प्रदर्शनमा ‘स्पेनी रिजल्ट’ धेरै हदसम्म निर्भर रहनेछ।
इनिएस्टा आन्द्रे इनिएस्टा अहिलेको स्पेनी टीमकै सबैभन्दा जेष्ठ खेलाड़ी हुन्। उमेर फुटबल करिअरका लागि ‘डाँड़ाको घाम’ भए तापनि यी 34 वर्षे खेलाड़ीको क्लास अहिले पनि झर्झराउँदो छ। प्रदर्शन उस्तै लोभलाग्दो।
इनिएस्टा विश्व फुटबलले पाएको लिजेण्ड मिडफिल्डर। स्पेनी ‘टिकी टाका’ शैलीका प्रमुख सूत्रधार। साथी खेलाड़ीका लागि गोलको अवसर सिर्जना गर्नु, मैदानको मध्यभागमा बललाई नियन्त्रण राखेर विपक्षी खेलाड़ीहरूलाई टीमको रणनीतिमा फँसाउनु र उपयुक्त समयमा स्वयं गोल गर्नु इनिएस्टाको खेल कौशल हो। विशेषता हो। खुबी हो।
इनिएस्टा त्यसै विश्वका सर्वश्रेष्ठ मिडफिल्डर बनेका होइनन्। उनको खेल कौशल, टीमलाई दिएको योगदान र भूमिका हेर्नुहोस्, तपाईं ढुक्क हुनुहुनेछ। विश्वकप 2010 -को फाइनल तपाईंले अवश्यै बिर्सिनु भएको छैन। यदि बिर्सिनुभएको छ भने इनिएस्टा ती खेलाड़ी हुन्, जसले हाइभोल्टेज फाइनलमा निदरल्यान्ड्सविरुद्ध निर्णायक गोल गरी स्पेनलाई पहिलोपटक विश्वकपको उपाधि दिलाएका थिए।
फ्ल्यासब्याकमा जानुहोस् र सोच्नुहोस्, गोल गरेपछि जर्सी खोलेर मैदानमा कुदिरहेको प्रायः साढ़े पाँच फुटेको इनिएस्टाको तस्वीर आँखामा झल्झली नाच्नेछ। यो विश्वकपमा इनिएस्टा 90 मिनटमै नखेल्न सक्छन्। उमेरको कारण स्पेनी कोच जुलेन लोपतेगेइले उनलाई महत्त्वपूर्ण समयमा मैदानमा उतार्नसक्छन्। त्यो महत्त्वपूर्ण समय पहिलो हाफ् पनि हुनसक्छ। र, दोस्रो हाफ् पनि। यति हो, खेलको जुनै समय मैदान आए तापनि इनिएस्टाले आफ्नो उपयोगिता र भूमिका बलियोसँग निर्वाह गर्नेछन्। हामी ढुक्क हुनसक्छौं।
नाम : आद्रे इनिएस्टा जन्ममिति : 11 मई 1984 जन्मस्थान : फुएन्टेलिबिल्ला, स्पेन उँचाइ :5फुट7इन्च खेल्ने पोजिशन : मिडफिल्डर जर्सी नम्बर : 8 वर्तमान क्लब : बार्सिलोना कुल क्लब म्याच : 728 कुल क्लब गोल : 62 अन्तरराष्ट्रिय म्याच : 124 अन्तरराष्ट्रिय गोल : 13 विश्वकपमा उपस्थित : चारपटक (रूस विश्वकपसहित) विश्वकपमा कुल म्याच :10 विश्वकपमा कुल गोल : 2
इस्को स्पेनका युवा ट्यालेन्ट। जण्डा मिडफिल्डर। गोल गर्न पोख्त खेलाड़ी। मिडफिल्डमा बल बुन्न मात्र होइन, गोल गर्न पनि उत्तिकै सिपालु। यो विश्वकपमा कोच जुलेन लोपतेगेइको ब्रह्माशास्त्र।
यी छरितो खेलाड़ीको बलमाथिको नियन्त्रण गजबको छ। गोल गर्ने ‘स्कोरिङ रेट’ उत्तिकै उत्कृष्ट। इस्कोले खेलिरहँदा लाग्छ, यिनी मिडफिल्डर कम र स्ट्राइकर ज्यादा हुन्। रियल म्याड्रिडका धेरजसो खेलाड़ीहरू खुट्टामा बल नचाउन खप्पिस छन्, यसमा इस्को एक पनि हुन्।
उनले जतिपटक राष्ट्रिय टीममा स्थान पाएका छन्, त्यो अवसरमा राम्रो गरी सदुपयोग गरेका छन्। इस्कोको प्रतिभा पहिलोपटक विश्वले अन्डर-19 र अन्डर-21 को खेलमा देखेको हो।
उच्च प्रदर्शन गर्ने यी युवा खेलाड़ीले अन्डर-19 मा 12 म्याचमा7गोल गरे। यो प्रदर्शनलाई अझ निखार्दै उनले अन्डर-21 मा 19 खेलमा 14 गोल गरे। उच्च प्रदर्शन गरिरहेका इस्कोलाई लिएर इङ्ग्लिस र फ्रेन्च क्लबहरूबीच हारालुछ छ।
यद्यपि उनले रियल छोड़ेका छैनन्। ‘इस्को साँच्चै प्रतिशाली खेलाड़ी हुन्’, धेरै अघि इस्कोबारे जिदानले यसो भनेका थिए। उमेर र प्रदर्शनसँगै इस्को अहिले स्पेनको स्टार खेलाड़ी बनेका छन्। स्टार खेलाड़ी हुनु भनेको टीमको दायित्व अझ बढ़्नु हो।
स्पेनेली प्रशंसकहरूको सपना उनको आँखामा सर्नु हो। यो सपनालाई साकार बनाउने ठूलो जिम्मा काँधमा थपिनु हो। इस्को जान्दछन्, ‘विश्वकप क्लब र मैत्री म्याचजस्तो होइन यसमा सम्पूर्ण देशवासीको सपना जोड़िएको हुन्छ। प्रशंसकहरूको आशा र भरोसा लहरिएको हुन्छ। यी सबैलाई न्याय दिनु नै राम्रो खेलाड़ीको गुण हो।’
उनीमाथि जुन दायित्व छ, त्यो केवल मैदानको मध्य भागमा बल बुन्नु मात्र होइन, साथी खेलाड़ीहरूलाई गोलको अवसर सिर्जना गर्नु मात्र होइन, तर टीमलाई आवश्यक परेको बेला गोल गर्नु पनि हो। म्याच जिताउनु हो। यति गर्नसके मात्र इस्कोले आफूमा रहेको क्लास र प्रतिभालाई न्याय दिनेछन्।
नाम : फ्रान्सिस्को रोमन अलार्कन स्वारेज ‘इस्को’ जन्ममिति : 21 अप्रेल 1992 जन्मस्थान : बेनालमडेना, स्पेन उँचाइ :5फुट9इन्च खेल्ने पोजिशन : अट्याकिङ मिडफिल्डर जर्सी नम्बर : 22 वर्तमान क्लब : रियल म्याड्रिड कुल क्लब म्याच : 329 कुल क्लब गोल : 61 अन्तरराष्ट्रिय म्याच : 26 अन्तरराष्ट्रिय गोल : 10 विश्वकपमा उपस्थिति : पहिलोपटक